GNOME 40 inouya pamwe nekuwanda kwekuvandudza, senge zviito pane yekubata pani | Linux Vakapindwa muropa
Zvakanaka, iri pano. GNOME 40 yakaburitswa zviri pamutemo, nguva pfupi yapfuura yechishanu yekuchengetedza kuburitswa kwedesktop v3.38. Iyo purojekiti yakavhura peji mairi marinotiratidza enhau dzakakurumbira, uye zita rinoreva kuti ivo vanofara nezve kuvhurwa uku. Iyo peji rakatumidzwa zita rekunongedzera, sezvo ivo vatama kubva kuGNOME 3.x kuenda mushanduro 40, muchidimbu kuti vadzivise kuvhiringidzika, sezvo GTK yaizoendawo kukwira ku v4.
Kutaura nezve peji ravakavhura, ndizvo emakumi.gnome.org, uye mariri vanotitaurira nezve shanduko senge nyowani nyowani maonero, ayo atinogona zvakare kuwana ne chiratidzo pane chekubata padhi. Izvi zvichavandudza ruzivo rwevashandisi, chimwe chinhu icho isu takamboshandisa macOS pane imwe nguva tinoziva zvakanaka. Pazasi pane iwe wakasara enhau dzakakurumbira dzakasvika ne desktop iyo inoshandisa Fedora 34, asi kwete Ubuntu 21.04.
Pfungwa dzeGNOME 40
Kugadziridza kwekuita kunoita kuti zvese zvifambe zvakanaka.
Zviratidzo pane yekubata pani izvo zvinotibvumidza isu kuti tiwane iyo yekutarisa / app grid neminwe miviri kumusoro (uye kubuda neminwe miviri pasi) kana chinja pakati penzvimbo dzebasa nekutsvedza minwe mitatu kurudyi / kuruboshwe.
Iwe unogona zvakare chinja pakati penzvimbo dzekushandira uye uwane iyo yekutarisa nekhibhodi, ine mapfupi Super + Alt + Kumusoro / Kuderera uye Super + Alt + Kuruboshwe / Kurudyi zvichiteerana.
Kuchinja pakati penzvimbo dzekushandira zvakare kunogoneka neguru vhiri, asi rakabatanidzwa neiyo Super + Alt makiyi.
Chikamu chitsva mudoko chinoparadzanisa maficha aunofarira kubva kune asiri iwo paanenge achimhanya.
Kugadziridzwa mune seti yekushandisa, senge rakagadziriswazve mamiriro ekunze, izvozvi zvave nyore kugadzira mapfupi ekhibhodi kubva kuZvirongwa kana kusarudzwa uye kumisikidzwa kweWiFi kwagadziridzwa.
Dhoku inoitika iri pazasi.
Chikamu che "About" ikozvino chinoratidza marongero evatengesi uye nhamba yemodheru.
Zip mafaera ane password anogona kuvhurwa kubva kuNautilus.
GNOME 40 ikozvino yakatangwa zviri pamutemo, asi chakanyanya kukurudzirwa ndechekuti isu tinomirira kusvikira kugoverwa kwedu kuchinge kuriwedzera. Vashandisi veUbuntu havangazvigamuchire zviri pamutemo, sekunge pasina chinoitika, ivo vachasvetuka vakananga kuGNOME 41 rinotevera Gumiguru. Canonical afunga kukanganisa parutivi rweyambiro uye kwete kuenda kuGNOME 40 + GTK 4.0 nekuti ivo vanotenda kuti, kazhinji, haina kuenderana sezvavanoda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » GNOME 40 ikozvino inowanika nekuwanda kwekuvandudza, senge yekubata kwepadesi uye ongororo yakagadziridzwa